पुरुषलाई छिटै आकर्षित गर्न सक्छन् यी ४ राशि भएका महिला ! – Patrika Nepal
मंग्सिर २६, २०७८ आइतबार 67
एजेन्सी , हरेक व्यक्तिको इच्छा हुन्छ कि आफ्नो गुणबाट अरु मानिस आफूप्रति आ’र्कषित हुन्। ज्योतिषशास्त्र अनुसार केही राशीका युवतिहरुमा अरुलाई सहजै आ’र्कषित गर्न सक्ने श’क्ति हुन्छ।
यी ४ राशिका युवतीले पुरुषलाई सहजै आ’कर्षित गर्न सक्छन्….वृष राशि:वृष राशि भएका युवतीहरुमा आफू सु’दर नभएपनि पुरुषको मन आफूतिर आर्कषित गर्ने थु’प्रै गुण हुन्छन्। सुन्दर स्वरूप र असल आ’चरण भएका यी युवतीको अगाडी कुनै पनि पुरुष आ’कर्षित हुन्छ।
यस राशिका महिला प्रति कुनै पनि पुरुष यसरी आकर्षित हुन्छ कि उनीहरु यी महिलाको हरेक कुरा मान्न तयार हुन्छन्। मि’थुन राशि: मि’थुन राशिका युवतीहरु निकै आकर्षक स्वभावका हुन्छन् जसको कारणले पुरुष यस राशिका महिला प्रति छिटै आर्कषित हुन्छन्।
सुन्दरताले मात्र नभएर यी महिलाको स्वभाव तथा बानी-व्यवहारले पनि मानिस यिनीहरु प्रति आ’कर्षित हुन् गर्छन्। वृश्चिक राशि :वृश्चिक राशि भएका युवतीहरुमा पनि पुरुषलाई आफू प्रति आ’र्कषित गर्ने गुण हुन्छ। यी राशिका महिला कुनै पनि ठाउँमा आफ्नो प्र’भाव छा’ड्न निकै माहिर हुन्छन्।
यी युवतीहरुमा आफ्नो बोलीबाट अरुलाई प्र’भाव पार्न सक्ने क्ष’मता हुन्छ। मीन राशि :मीन राशि भएका युवतीहरु प्रति प्राय: पुरुषहरु छिट्टै आ’कर्षित हुन्छन्।
यस राशिका महिलाको रो’मान्टिक स्व’भावले पुरुषलाई छिटो आ’र्कषित गर्छ। मीन राशिका युवतीहरु सुन्दर हुनुका साथै मिलनसार स्व’भाव र मधुर बोलीले जो कोहि पनि यिनीहरु प्रति आ’कर्षित हुन्छन्।
Prevडिभोर्स भैसकेकी पूर्व पत्नीलाई कोठामा पुगेर.. जे गरे!
Nextदिनदिनै सुनको मूल्य घट्ने क्रम जारी : व्यवसायी भन्छन् अब छिट्टै आफ्नो पुरानो मुल्यमा पुग्ने
टिकटकमा भाइरल कोमलको अन्तरजातिए बिबाह | परिवाले स्विकार नगर्दा टेक्टरमा भागी बिबाह (भिडियो)
केही दिनसम्म नरिवलको तेलमा यो एक चीज मिलाएर लगाउनुहोस्, आफै देख्नुहुनेछ चमत्कारी लाभ